Lesi sitayela kwamiswa phakathi nekhulu leminyaka elidlule, futhi udumo kwaba ngo-90s, sibonga onobuhle abadumile phezulu, usebenzisa in ikhabethe lakhe kwakudala. Ngokuvamile, isitayela vintage kuyinto isethi eziphilayo izinto imfashini ngemfanelo ngesikhathi indalo yayo. Okungukuthi, ekwenzeni isiphetho, kungaqondakala ukuthi le ncazelo Kuthi ezingacacile, njengoba ezokwamukeleka yena kanye izingubo emakhulwini eminyaka adlule, nezinto intsha yabazali bethu.
Kukhona isimo sokunquma amabili eyenza umuntu uyakwazi ukuhlukanisa, le nto vintage noma nje ubudala. Okokuqala - nansi into ubudala. Hat, ijazi, ingubo ngale ndlela, kumelwe abe lama- engamashumi amabili isimiso ukulinganiselwa. Omdala nto, kulapho kakhulu it is zenani. Ngokwesibonelo, imfanelo eqolo futhi ezingavamile fashion vintage abhekwa igqoka kwenkathi uVictoria.
Umbandela wesibili kuyinto isitayela lapho into yenziwa vintage. Uma ukugqoka ingubo vintage, ucabanga nesikhathi lapho kwaba ethandwa. Lezi zinto ikhabethe bayingxenye isiko lesengcile, babeka nomkhathi wawo. Ukugqoka izingubo ezinjalo - kusho, ukuze bakwazi ukwakha i look organic. Into Vintage akulula ukuhlanganisa, kodwa umvuzo ngomsebenzi wakho onzima ziyojabula ngisho a baxgeki okhuthele kakhulu.
Fashionista, wanquma ukuqhubeka ukudalwa uyosisebenzisa ngendlela engaphezu kwevamile, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi izinto ezindala, kanye entsha, kumelwe ahlale kahle isibalo. Ngenxa yale njongo zonke izici wezigqoko sutured futhi zilungiswe ngokuhambisana imingcele ethile. It kuyafaneleka ukucabangela ukuthi lekhethelo - izingubo isitayela, okuyinto ngokuvamile kudinga utshalomali eside isikhathi nemali. Ngeke nithole lutho njengalelo elisensimini lesibili ngesandla ezitolo.
Indima ebalulekile ukudalwa lendzala ukudlala izinsimbi. Ngaphandle kwawo, ngisho ingubo imfashini kakhulu eminyakeni edlule uyobheka buthuntu futhi sidle. Vintage imvunulo imigexo kanye jewelry ingatholakala "isiqu kukagogo" noma izitolo Antique. Namuhla isidingo ububanzi lwemigexo ezenziwe ngesandla, eliqoshiwe "Antique". Futhi izinto athandwayo kusukela okuthiwa "kuhlangene vintage." Yilezi izinto owenza amakhosi yesimanje zezinto ezindala.
Izindleko eziphezulu zokuthola izidingo izesekeli vintage nazo kunqunywa ubudala bayo. Ungadumali uma ungazitholi into vintage efanelekayo, ungahlala uyenze eyakho noma yenze umyalo okuhambisanayo kusukela master professional. Uma uqamba amanga emhlabeni omagazini fashion ubudala, ukusetshenziswa enikeziwe kukhona iphethini. Kodwa khumbula ukuthi into vintage iwukuba ube nje kuphela Imi ezifanele. Zama futhi usebenzise izinto e oyiyo lizofana labo emashumini esetshenziswa ngaphambili.
Ungakhohlwa ukuthi ubani uqeda izimonyo, okufanele kuvumelana isitayela ekhethiwe zokugqoka. Futhi akusiyo ezibalulekile noma ngabe begqoke like a princess ephakathi okufanayo esemncane yesimanje - Kunoma yikuphi isithombe kufanele kube okunengqondo ngokuphelele futhi kuphelile. A umsizi okuhle ukukhethwa kanye indalo a vintage-isitayela izingubo imfashini indaba kanye omagazini ubudala efanayo.
Linokrom: ezibekiweko lobuchwepheshe, intengo, ukubuyekezwa
Ingane wayenqaba webele: yini okufanele uyenze?
Izingxube izingane: "NAS Antireflyuks" ingxube ababelethwa kungakafiki isikhathi
"Umzila yokwesaba" - ingilazi zomgwaqo njengoba kwalasha, omunye ezikhangayo China galvnyh